एउटा छोरो नेपालमा, अर्को अमेरिकामा बितेपछि…. – Samatal Online
एउटा छोरो नेपालमा, अर्को अमेरिकामा बितेपछि….
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:४३ June 3, 2019 Samatal Online0Comments
काठमाडौं । भूकम्पले होस् वा अरु कुनै दुर्घटना, मानिसको परिवारमा आइपर्ने शोकले भवितव्य बोकेर ल्याउँछ । र, कहालिलाग्दो शुन्यतासँगै वियोगान्त त्राशदि छाडेर जान्छ । भनिन्छ, भवितव्यलाई टारेर टार्न सकिँदैन । तर, शोकलाई शक्तिमा बदल्नुको अर्को विकल्प हुँदैन ।
विष्णु गौतमको परिवारमा पनि एकपछि अर्को वियोगान्त भवितव्य आइलाग्यो । तर, उनीहरुले शोकलाई एउटा अदम्य साहसमा बदले । साहस शक्तिमा रुपान्तरण भयो । हामी यहाँ यिनै उदाहरणीय बुबा-आमाको वियोगान्त कथा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं-
छोराको मृत्युबारे सुनाउँदै गर्दा विष्णुको अनुहार अँध्यारो बन्यो । ‘त्यतिबेला पनि ड्राइभरले भन्यो- सर पेट्रोल छैन । मैले एक हजार फालिदिएँ’ विष्णु भन्छन्- मानिस त्यतिसम्म सम्वेदनहीन पनि बन्न सक्दोरहेछ ।’
त्यतिबेला युवाहरु बाहिर जाने लहर चल्न थालेको थियो । त्यसैले मैले गाउँमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थिएँ’, विष्णुले रिसोर्टको योजना सम्भिmए ‘हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको थियो । त्यसैले मैलेँ, आवश्यक सबै खानेकुरा त्यही उत्पादन गर्ने, मासुहरु पनि गाउँकै प्रयोग गर्ने गरी रिसोर्टको योजना बनाएँ । यति भएपछि एक त गाउँलेले रोजगारी पाए, अर्को गाउँलेको व्यवसाय पनि बढ्ने भयो । टुरिस्ट पनि पुग्ने भए ।’
पुत्रवियोगले विच्छिप्त विष्णु त्यही निर्माणधीन ब्लकको रेखदेख गर्न जान्थे । कहिले त्यहीँ सुत्थे । उनी भन्छन्, ‘जब म वाइक स्टार्ट गथेर्ं, मेरो आँखामा झल्झली छोरा आउँथ्यो । म यति धेरै रुन्थेँ कि आशुले अण्डरवेयर समेत लुछुप्पै हुन्थ्यो । तर, त्यो मेरो भत्पति पोलेको छाती र आँशु अरु कसैलाई देखाइनँ ।’
उनी ल्यापटपमा छोराको फोटो हेर्दाहेर्दै निदाउँथे । सपनामा पनि छोरालाई नै देख्थे । तर, उनलाई परिवारका अगाडि रुने छुट थिएन । नत्र परिवारलाई कसले सम्हाल्ने ?
त्यतिबेला एकजना बच्चा विष्णुको काखमा लड्न आइपुगे । विष्णुले च्याप्पै समाते । उनको शरीर बिरामीले थलिएको थियो । अनायास विष्णुका आँखामा पोखरी जम्यो, ‘मलाई आफ्नै छोरा समातेको अनुभुति भयो ।’
तर, दुःखद के भने उनले बनाएका आधा घरमा अहिले मान्छे छैनन्, बसाइँ सराइँ गरेका छन् । ती घरमा पनि अहिले १० वर्ष लिजमा लिएर उनले होस्टेल शुरु गरिएको छ । जहाँ कान्दाका ३० जना बालवालिकालाई ल्याएर पढाइएको छ ।
← कोरियन भाषा परीक्षा जेठ २५ र २६ गते, Exam Center कहाँ पर्यो ? (सूची सहित)
आज (सोमबार)को मौसम : मेघगर्जन सहित वर्षा हुने →
आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट : नेपालले कुवेतलाई ७ विकेटले हरायो
११ श्रावण २०७६, शनिबार ११:१३ Samatal Online 0
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १८:२७ Samatal Online 0
असार पन्ध्र- मनै हिलाम्य- बालस्मरणसहित
१५ असार २०७५, शुक्रबार ०७:१२ Samatal Online 0